အရေပြားတစ်ထောက်စာအလှဟာ ထာဝရလား? | သိလိုရာမေး
ဒေါက်တာဒိအားမေးရန် အရေပြားတစ်ထောက်စာအလှဟာ ထာဝရလား?
ကျွန်မနာမည်ကတော့ မျိုးမျိုးပါ။ ကျွန်မ အသက်ကတော့ ၁၇ နှစ်ရှိပြီး ပထမနှစ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူပါ။ အထက်တန်းကတည်းက ခုချိန်တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အထိ လူတိုင်းသိကြတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်။
အဲ့တာကတော့ ကျွန်မမျက်နှာပေါ်က ဝက်ခြံတွေပါပဲ။ ကျွန်မ အသက် ၁၃ နှစ် အပျိုဖော်ဝင်ခါစအချိန်ကစပြီး ဝက်ခြံထွက်လာတာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲ့တုန်းကတော့ ထွက်လိုက်၊ ပြန်ပျောက်သွားလိုက်နဲ့ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ပေါ့။ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ၁၀ တန်းရောက်လာတဲ့အခါမှာ ကျောင်းတစ်ဖက်၊ ကျူရှင်တစ်ဖက်နဲ့ ဆိုတော့ သွားရလာရတာတွေအပြင် စာလုပ်ရလို့ ညဉ့်နက်သွားတာတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများတာတွေ ကြုံခဲ့ရတယ်။
အဲ့တော့ စားချိန် အိပ်ချိန်ကလဲ မမှန်၊ စာလုပ်ရတဲ့အခါမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ၊ ဖိအားတွေကလဲ များဆိုတော့ အဲ့မှာ ဝက်ခြံတွေ စထွက်လာတော့တာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ရာသီမလာခင် ရက်ပိုင်းအလိုလောက်ဆိုရင် ပိုဆိုးတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ သူများညွှန်းတဲ့ ကောင်းနိုးရာရာ ဝက်ခြံပျောက်လိမ်းဆေးတွေ သုံးတယ်၊ အစားအသောက် အနေအထိုင်ကိုလဲ ဂရုစိုက်ပေမယ့် ၆ လ ၁ နှစ်လောက် ကြာတဲ့အထိ သက်သာသလို ဖြစ်လိုက်၊ ပြန်ထွက်လာလိုက်နဲ့ လုံးချာလိုက်ပြီး သံသရာကို လည်နေတော့တာပဲ။ကြာလာတော့ သူငယ်ချင်းတွေကလဲ ကျွန်မ မျက်နှာက ဝက်ခြံတွေကို ကြည့်ကြည့်ပြီး မထိတထိနဲ့ စကြတယ်။ လမ်းမှာတွေ့တာနဲ့ ခင်တဲ့သူတွေက နင့်မျက်နှာကြီးက လကမ္ဘာမျက်နှာပြင်ကြီးအတိုင်းပဲ ဆိုပြီး စတော့ ကျွန်မမှာ စိတ်လဲ တို၊ ဝမ်းလည်းနည်းရတဲ့ အချိန်တွေလဲ မနည်းမနောပါပဲ။
အဲ့တာနဲ့ ကျွန်မလဲ ဒီပြဿနာကို အိမ်မှာပဲ ကောင်းနိုးရာရာ ဆေးမြီးတိုတွေ၊ အလှကုန်တွေနဲ့ပဲ ကြိတ်ကုနေလို့တော့ မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး အမေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး အထူးကုဆေးရုံကို သွားပြဖြစ်တယ်။ သွားပြတော့ ဆရာဝန်မမက ကျွန်မရဲ့ မျက်နှာကို သေချာစစ်ဆေးပြီး အစားအသောက်၊ အနေအထိုင် စနစ်တကျဆင်ခြင်ဖို့အပြင် လေဒီယာရဲ့ ကလဲယာ ကိုလဲ သောက်ဖို့ ညွှန်းလိုက်တယ်လေ။ ဒေါက်တာမမက သူညွှန်းတဲ့ဆေးအကြောင်းကိုလဲ ကျွန်မကို သေသေချာချာရှင်းပြတဲ့အခါမှာ ကျွန်မက အပျိုဖြစ်တဲ့အတွက် အစက သားဆက်ခြားဆေးဆိုတော့ သောက်ဖို့ စိုးရိမ်နေသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒေါက်တာမမက လေဒီယာရဲ့ ကလယ်ယာက သားဆက်ခြားဆေးဆိုတာ မှန်ပေမယ့် ကိုယ်တွင်း ဟော်မုန်း မညီမျှတာကြောင့် ဝက်ခြံထွက်တာမျိုးတွေ၊ ရာသီမမှန်တာ၊ ရာသီလာခါနီး နာကျင်ကိုက်ခဲတာမျိုးတွေအပြင် တချို့မိန်းကလေးတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ကျားဟော်မုန်းတွေများနေလို့ အမွှေးအမျှင်တွေထွက်တာ ကိုတောင် သက်သာနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ ရှိတယ် ဆိုပြီး ရှင်းပြတယ်။ ဒီကြောင့် ဒီလို ပြဿနာမျိုးတွေ ကြုံနေရတဲ့ အိမ်ထောင်သည်မှမဟုတ် အပျိုတွေပါ ဒီဆေးကို သောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ ပြောပြတယ်။
ဒီတော့ ကျွန်မလဲ ဆရာဝန်မမ ကိုယ်တိုင်ကိုက ကျွန်မမျက်နှာကို သေချာစမ်းသပ်ပြီး ညွှန်းပေးတော့ စိတ်ချလက်ချပဲ စသောက်ဖြစ်တာပေါ့။ ခုဆိုရင် ကျွန်မ လေဒီယာရဲ့ ကလယ်ယာကို စသောက်နေတာ ၁လခွဲလောက်ရှိပြီ။ ဆေးတစ်မျိုးတည်းသောက်ရုံနဲ့တော့ ဝက်ခြံတွေ ယူပစ်သလို ပျောက်ကင်းသွားမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အစားကိုလဲ အပူစာတွေ ရှောင်သင့်ရင်လဲ ရှောင်တယ်၊ အိပ်ချိန်မှန်အောင်နေတယ်လေ။
ဒီတော့ ကျွန်မက ကျွန်မလိုမျိုး ဝက်ခြံပြဿနာကို ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို အကြံပေးချင်တာကတော့ အစားအသောက်ကို ဂရုတစိုက်နဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန်စားပါ။ အိပ်ချိန်မှန်အောင်နေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျှော့ပါ။ စိတ်ရှည်ပါ။ ရုပ်လှဖို့ထက် စိတ်လှဖို့၊ အရည်အချင်းရှိဖို့ စတဲ့ အရာတွေက လူ့ဘဝမှာ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ပြီးတော့ အစတုန်းက ကျွန်မလို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကောင်းနိုးရာရာ ဆေးမြီးတို နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကြိတ်မကုပါနဲ့။ အခြေအနေဆိုးလာရင် ဆေးရုံဆေးခန်းကိုသွားပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တိတိကျကျလိုက်နာလိုက်နာရင်တော့ တစ်နေ့မှာ ကိုယ့်အလှကို ဖျက်နေတဲ့ ဝက်ခြံပြဿနာတွေကို တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဝက်ခြံသက်သာစေရန် သောက်နိုင်သည့် လေဒီယာ ကလယ်ယာကိုကြည့်ရန်နှိပ်ပါ